Lionel Messi Oo Magacaabay Ciyaartoygii Ugu Wanaagsanaa Ee Ingiriis Ah Ee Uu Ka Hor Yimid Iyo Cristiano Ronaldo Oo Ku Waafaqay | Laacib.net
17-11-2018 Abdiwahab A. Abeye 3
Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi waxa uu sannado badan oo uu garoomada ku jiray ka hor tegay ciyaartooyo waaweyn oo Ingiriis ah sida Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand, Paul Scholes iyo xiddigo kale, laakiin waxa jira hal ciyaartoy oo si gaar ah ugu calaamadsan oo aanu weligii illoobi doonin sidii uu u shaqaynayey iyo hal-adaygiisii.
Lionel Messi oo shan jeer ku guuleystay abaal-marinta ciyaartoyga ugu wanaagsan dunida ee Ballon d’Or, ayaa hoggaaminayey kooxdii Barcelona ee sannadkii 2009 ay finalka Champions League iskaga hor yimaaddeen Manchester United, halkaas oo mucjisada reer Argentine uu kooxdiisa u qaaday Koobka iyadoo ay garoonka dhex-taagan yihiin Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Rio Ferdinand iyo Vidic
Inkasta oo Lionel Messi aanu weligii ciyaaraha caalamiga ah ama qaramada kaga hor imanin Wayne Rooney, haddana toddobaadkan ayaa uu halyeyga reer England si rasmi ah usoo gunaanaday ciyaaraha caalamiga ah, waxaana kulan sagootin ah oo ka dhacay garoonka Wembley Khamiistii uu ku tiiriyey kabihii, isla markaana ku siibay funaanaddii uu xidhay sannadkii 2003 iyadoo ay xilligaas da’diisu ahayd 17 jir.
Sida uu qoray Wargeyska Coach Magazine, Lionel Messi ayaa ku tilmaamay Wayne Rooney ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee British ah ee uu waligii ka hor yimaaddo, laakiin fikirkaas waxa ku waafaqay Cristiano Ronaldo oo ay lix sannadood isku koox ahaayeen.
“Sannadihii aan kooxaha British-ka ah kaga hor tegay tartamada Yurub, waxaan la ciyaaray laacibiin badan oo wanaagsan, laakiin mar walba ciyaartoyga aan ixtiraamka iyo xushmadda ugu badan siiyey wuxuu ahaa Rooney. Wuxuu u ciyaaray heerka ugu sarraysa sannado badan, waxaanu ka mid yahay ciyaartooyada ugu fiican ee jiilkan” Sidaas waxa yidhi Lionel Messi oo sifaynayay Wayne ROoney.
Hadalkan waxa Messi ku waafaqay xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo ay u wada ciyaari jireen Manchester United oo la yaabay awoodda maskaxeed iyo adayga Rooney.
“Aniga ahaan, awoodda Wayne Rooney waa maskaxdiisa iyo adkaysigiisa. Weligii ma istaaago, mar kasta wuu ordayaa, kooxdana caawinayaa. Waa ciyaartoy kooxood oo caiib ah, goolal badanna dhaliya. Wuxuu dhaliyey goolal muhiim ah, aniga ahaanna waa ciyaartoy aanan qiyaasi karin. Waa carruurtii Ingiriiska. Qof walba wuu jecel yahay. Waa wiil yaab leh iyo ciyaartoy cajiib ah.” Sidaas waxa yidhi Cristiano Ronaldo oo amaantii ugu cuslayd u xambaariyey Cristiano Ronaldo.
18-11-2018 at 9:50 am
haa waan Ku taageersanahay c.ronaldo qodobkaa
18-11-2018 at 1:20 am
Anigu waxan ahay wiilka iska leh garsiye.com kuna taxan laacib.net waxaana ahay taageero messi wan jeclahay warbixinada sidaan oo kale ah fadlan isku daya taarikhaha qarsoon ee kubada cagta inaa noo soo qortaan , mahadsanidiin
17-11-2018 at 7:05 pm
Wanku tageeray hadalkas messi Wayne Rooney wuxu ahaa ciyartoy LA yaab leh oo tarikh wanaagsan leh